Homeसमाचारकाफल पाकेसँगै किन कराउँछ ? ‘काफल पाक्यो चरी’ हे’र्नुहोस्
April 8, 2021 admin समाचार 7178
‘बेडू पा’को बारो मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला…’ भारतको उत्तराखण्ड लगायतको भेगमा प्र’सिद्ध यो गीत स्व. मोहन चन्द्र उप्रेतीले लेखेका हुन् । उत्तराखण्डमा चर्चित रहेको यो गीतले काफलको महिमा र काफल पा’केसँगै आउने काफल पाक्यो चरीको व्याख्या गरेको छ । नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी मुलु’कमा समेत विशेष रहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
नेपाली लोक कथा’नुसार परापूर्वकालमा बुबाआमा गुमाएका (टुहुरा) दाजुबहिनी थिए । आमाबुबाको देहाव’सानसँगै गुजाराको अभावमा भोकै बस्नबाध्य दाजुब’हिनीमध्ये दाजुले खानाको खोजीमा बाहिर जाने निर्णय गरे । बहिनी झनै रुन थाली । बाबुआमाले छाडेको दाइले पनि छाड्न लाग्नुभयो भनेर बिलौना गर्दा दाजुले काफल’को बोट देखाएर काफल पाक्ने स’मयमा म बहिनी भेट्न आउँछु भनेर निस्किए ।
‘बेडू पा:को बारो मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला…’ भारतको उत्तराखण्ड लगायतको भेगमा प्रसि’द्ध यो गीत स्व. मोहन चन्द्र उप्रेतीले लेखेका हुन् । उत्तराखण्डमा चर्चित रहेको यो गीतले काफलको महिमा र काफल पा’केसँगै आउने काफल पाक्यो चरीको व्याख्या गरेको छ । नेपालमा मात्र नभएर छि’मेकी मुलुकमा समेत विशेष रहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
नेपाली लोक कथा’नुसार परापूर्वकालमा बुबाआमा गुमाएका (टुहुरा) दाजुबहिनी थिए । आमाबुबाको देहावसा’नसँगै गुजाराको अभावमा भोकै बस्नबाध्य दाजुबहिनीमध्ये दाजुले खानाको खोजीमा बाहिर जाने निर्णय गरे । ब’हिनी झनै रुन थाली । बाबुआमाले छाडेको दाइले पनि छाड्न लाग्नुभयो भनेर बिलौना गर्दा दाजुले काफ’लको बोट देखाएर काफल पाक्ने समयमा म बहिनी भेट्न आउँ’छु भनेर निस्किए ।
याम फे’रियो बहिनीले जंगलमा फलफूल खाएर समय बिताइ, केही समयमा काफल पनि पा’क्यो । तर अफसोच बहिनी छाडेर गएका दाजु फर्किएनन् । बहिनी आत्तिन थाली । एक्लो’पनले उनलाई सतायो । काफल पाक्यो बरै मेरा दाजु आएनन् भन्दै उनी बिलौना गर्न थालिन् । त्यही चिन्ताले उनको देहाव’शासन भयो । अहिले जंगल जंगलमा काफल फाक्यो भन्ने जस्तो आवाज दिने चरा त्यही बहिनीको अर्काे जन्ममा लि’एको चरा हो भन्ने लोक कथा छ ।
चैत वैशा’खको समय अर्थात् जंगलभरि पाकेको काफलले राताम्मे बनाउने र ‘काफल पाक्यो चरीले’ आफ्नो धुनले जंगल थर्का’उने समय हो । काफल वि’शेषगरी पहाडी भेगमा फल्ने एक किसिमको स्वादिष्ट र पौष्टिक फल हो । यो चैत र वैशाख महि’नामा पाक्ने गर्छ ।
तर यसको वैज्ञा’निक पक्ष अलिक अर्कै खालको छ । चरा विशेषज्ञ कमल मादेन ‘काफल पा’क्यो’भन्ने जस्तो स्वर दिने चरा एक खालको घुमन्ते चरा रहेको बताउँछन् । यसको स्वरमा त्यस्तो आवाज सुनिएको भए पनि यसले का’फल पाक्यो भन्ने आवाज भने ननिकाल्ने मादेन बताउँछन् ।
काफल पाक्यो चरीको वैज्ञानिक नाम क्युकुलस माइक्रो’प्टेरस हो । यो नेपाल लगा’यतका दक्षिण एसिया तथा पूर्वी एसियाका केही स्थानहरूमा पाइने गर्छ । यो चरा समुन्द्री सतहबाट ३६०० मिटरसम्मको उचाइमा रहेको जङ्ग’लहरूमा पाइने गर्छ ।
विशेषगरी नेपा’लमा चैत वैशाख महिनामा आउने यो चरा थाइल्याण्डमा अरु समयमा पनि कराउने गरेको भेटि’एको मादेन बताउँछन् । अरु बेला दक्षिण पूर्वी एसियामा घुम्ने यो चरा वसन्त ऋतु आएपछि नेपाल आउँछ । यही सम’यमा यहाँ काफल पाक्ने सिजन पनि भएकोले काफल पाक्यो चरा आएको भन्ने भान भए पनि काफ’ल पाक्यो चरा र काफलको प्रत्यक्ष सम्बन्धबारे भने प्रमा’णित तथ्य नभेटिएको मादेन बताउँछन् ।
काफलको ‍औष’धीय गुणहरू
काफल अमिलो-गुलियो एवं रसिलो फल हो । यो फलले जिब्रो मात्र लोभ्याउँदैन, यसमा औ’षधिय गुण पनि हुन्छ । विभिन्न समस्यामा का’फलको दाना, बोक्रा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
ज्वरो आएमा, घाँटी’को समस्या भएमा, दम बढेमा, रगतको कमी भएमा काफलको सेवन उपयोगी हुन्छ । खाना अरु’ची भएमा काफलको सेवनले लाभ मिल्ने बताइन्छ । साथै मधुमेह रोगको लागि पनि यो रामबाण हो । आयुर्वेद विशेष’ज्ञहरुले यसमा एन्टी अक्सिडेन्ट भरपुर मात्रामा पाइने बताएका छन् । यस फलको सेवनले मुटु लगायत क्यान्सर रोगको जो’खिम कम गर्ने बताइन्छ ।
कान’को रोग, आँखाको रोग, अनियमित मासिक स्राव, टाउको दुखाई आदिमा काफलको धुलो, बोक्रा आदि’को औषधी बनाएर सेवन गर्दा लाभ मिल्ने बता’इन्छ । यसैगरी दम, नपुंशकतामा समेत काफल उपयोगी हुन्छ । बाहिरी घाउचोट निको बनाउन का’फलको बोक्राको धुलो प्रयोग गर्न सकिन्छ । अनलाइन खबरबाट
January 19, 2021 admin समाचार 6603
समिर आचार्य र रोशनी था’पाको स्वर रहेको गीत ‘माकुरी’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा मिस्टर आर.जेको र्याप छ । नेपाली गीतसंगीतको क्षेत्रमा आफ्नो फ’रक पहिचान बनाएका ¥यापर राजेन्द्र भट्ट (मिस्टर आर.जे)को नामले चिनिन्छन्। गीतको भिडियोमा
February 18, 2021 admin समाचार 6358
February 1, 2021 admin समाचार 6572